Gobolada Dhexe: Maxaa Guddoon La’aan Dhigay? W/Q. Bashiir M. Xersi | Home	Latest
Gobolada Dhexe: Maxaa Guddoon La’aan Dhigay? W/Q. Bashiir M. Xersi
February 6, 2013	8 comments	66	Articles, Warar	Maqaal: Horta Gobollada Dhexe waa meeqa? Ma saddax gobolbaa mise waa labo? Micnaha ma HIIRAAN, GALGUDUUD iyo MUDUG baa, mise waa: MUDUG iyo GALDUDUUD oo kali ah? Aqriste, jawaabta aan kuu daaye, bal ila dhiraandhiri qormadan, ku qaabsanaa doonta bartmaha Waddanka.
Waxaa lagu xasuustaa, inay ka mid ahaayeen deegaannada fara ku tiriska ah, ee aan laga helin xilligii HALGANKA XORMNIMO DOONKA, wixii loo baxshay: PRO ITALIANO, oo ah axsaabtii raacsanayd siyaasadda Talyaanigi Waddanka ku hagayey.
Inta laqdabada iyo luggooyoda loo heellanaa marka dhan la iska dhigo, midda dhaxal reebtay waa; iskaashiga iyo maamul wadaagga kan lagu saleeyey, oo noqday furaha nolosha, deegaanno dhawr ahna lagu helay naruuro yar oo nabad iyo nagaadi ah, yeysanba buurnayn, oo wax la’aan ayey dhaantaaye. Aqriste, ma is tiri Gobolladan tan baa ka maqan?.
Qasku wuxuu gaaray heer AQOONYAHAN iyo INDHEERGARAD lagu diimay. Cabsi iyo inaysanba jirin midba. Sidii loo walaahoodayey, ayaa mar qura waxaa DILLAACAY DAACUUN DIIMEEDKII ka dhashay DACAR DUUGNEED muddo aan QARNI ka yarayn. Waxaa la islahaa Wadaadada iyo Diinta wax dhaama ma lahan. Waa maroo iyagaa dadka Alle uga dhaw aqoon iyo garasho awgeed ama ugu dhaw cabsi iyo cibaad darteed. Waa marka kalee, waxaa dadku halkudhag ka dhigteen haddaan la qabsan XARIGGA ALLE inaan dawlad iyo maamul dhismayn!
Inta dhacdo la warsho ee ku saabsan sir wadaad ma yara. Run iyo mala’awaal miday tahayba, waxay muujinayaan sida loogu kadsoomay sheekadii WADAADU wadeen. Sidoo kale, waxay ka dhigan tahay sida loogu hungoobay XARIGGII ALLE ee la lahaa wuxuu unug u yahay dalwad Soomaali oo dhisanta. Oo kaalay inta dunida dawlado ka dhisan ma XARIG ALLE ayey wada haysan? Maxaa keenay in maamullo u dhisan yihiin, anaguna aan eber u taagan nahay wali, anagoo waliba isku day samaynay? Maa runta la abbaaro oo madax geed la dhaca nalaga daayo? Haddii kale, maalin walba NIMAN aan jirin ayaa sal kicin doonee.
Ayaan darrada baase ahayd, in JIHAADKII noqday JIDGOOYO cusub. Illeen talo Tigree iyo tab Xabashi ayaa tubteeda la qaadaye. AHLUSNNA ha iska caabinayso falalka gurracan ee ALSHABAABE saw iyaguba ma ahan DHAL AMXAARO? Micnaha saw ma ahan dhisme Amxaaro samaysay ee ay walibana fangarayso ciidan ahaan iyo cudud ahaanba? Mise iyaga AWLIYO iyo MALAA’IG ayaa ka garab dagaallanta, oo Xabashi uma baahna? Isma dhihin!
Midda aan qofna dood ka qabin yaa ah; in qofkii ku dhiba, ee dhabbaqo iyo shidaad kaa dayn waaya, aysanna jirin qof kaa celisa ay xaq tahay in aad u doonatid wax kaa hor istaaga, SHAYDAANBA ha noqdee. Malaha waana midda AHLUSUNNO xoogga saartay, hadday taa ku guulaysatay, maxaa xigay? Waa qodobka aan qoramada ku falanqayn doono.
Saddax sano ka dib, DEEGAANKA GOBOLLADA DHEXE yaa taladiisa gacanta ku haya? Haddii qorshe daba dheeraado, wuxuu keenaa daldaloollo badan, sidaa awgeed, kan AHLUSUNNA isagaaba markii hore iska daldaloolaye, maxaa yeelay haddaad AL uga gabbanayso AL kale inaadan meel dheer gaarayn way muuqataa. Waxaan uga jeedaa, caqli ahaanWADAAD waa WADAAD, ee waxay ahayd inWADAADADA SUBAGLAYDA ah aan loo dayn kaaligood maamulka deegaanka. Ma ahan inaysan wax ku lahayn ama loo diidayo, ee waa iyaguba inaysan ka aragti gaddisnayn kuwa ay iska caabbinayeen dhanka maamulka iyo awood qaybsiga.
Sida loo kala guuray ee kala geeddi loo noqday ayaa loo kala degay. Degid deegaan iyo mid dareenba. Haddana meelaha aan wali degin waxaa ugu horreeyaa deegaannada ay ka arrimyaan AHLUSUNNA ee GOBOLLADA DHEXE. Waa inaan is weydiinnaa waxa keenay arrintan? Waa inaan u helnaa jawaab. Illeen intaa waqtigu waa socdaaye. Maalin walba oo na dhaaftaa dib u soo noqon mayso, haddaan lagu gudan waxqabadkeedee.
Dib u milicso maalintii ay hana qaadeen ilaa iminka, lama haayo tallaabo horumareed oo ay qaadeen ee leh; xag ammaan